Windows Defender inotakurirwa kuLinux nekuda kwaTavis Ormandy | Linux Vakapindwa muropa
Dzazvino mukushaikwa zviri Windows Defender paLinux, hongu, uku hakusi kutamba. Hatisi kutamba newe. Asi mainjiniya eGoogle anonzi Tavis Ormandy, uyo anoshanda pakutsvaga injini hombe seye nyanzvi yekuchengetedza, akagadzira vhezheni yeWindows Defender inokwanisa kumhanya paLinux. Kunyanya, zvayakaita kutakura injini yekuchengetedza malware yeMicrosoft kuLinux.
Kuti aite izvi, mainjiniya akashandisa Loadlibrary, chishandiso chakagadzirwa naiye chinotendera kurodha Windows DLLs paLinux. Uye izvi zvechokwadi zvinotiyeuchidza nezve waini purojekiti, inozivikanwa inozivikanwa inoenderana iyo inokutendera iwe kumhanyisa yemuno Windows software papenguin chikuva. Izvo zvakawanikwa naTavis zvinokatyamadza, asi zvinoramba zviri anecdote, sezvo iko kushandiswa kuri kusabatsira vashandisi.
Izvo chete zvinoshandiswa zveGoogle ndizvo ita zvimisikidzo zveKuti ubvise zvimwe zvipembenene uye kusagadzikana kune software inomhanya paLinux. Ndokusaka iyi feat naOrmandy, kuti izvo zvaari kutsvaga kuedza kuwana zvikanganiso mukuchengetedza kweWindows Defender iyo inogona kushandiswa. Saka zvaitaridzika senge antivirus nyowani yeLinux haisi. Uye chokwadi ndechekuti isu hatingade icho dai zvaive zvakadaro ... tinogona kuwana zvishoma kushandisa kubva pazviri kupfuura kuzviongorora sezvavanoita.
Chimwe chinhu chakakosha chinosiya kumashure kwenhau chishandiso chine simba icho mainjiniya vacho Google, Loadlibrary, iyo inogona kubatsira kuvhura sosi mapurojekiti seWini mune ramangwana kurodha Microsoft inesimba maraibhurari, iyo inozivikanwa DLLs, paLinux / Unix kana kugadzirisa mamwe mapurojekiti senge yakakurumbira ReactOS inoshanda sisitimu iyo zvakare inotsvaga kugadzira yakavhurika sosi Windows clone uko kumhanya software yakagadzirirwa Microsoft system ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Windows Defender inotakurirwa kuLinux nekuda kwaTavis Ormandy
Dai chete ini ndaive ndakanyatso kuendesa Google Drive kuLinux ...
Ndinovimba Aguirre akadaro
Icho chinotyisa, munguva pfupi ivo vachatakura Norton antivirus uye nenyika kwazvinogumira
Pindura Esperanza Aguirre
nei iyo fuck ichitsvaga google yekushomeka windows? izvo hazvidi kuita microsoft o_O
Pindura kuna Luicas